2021 NYC White Label Expo's Anotungamira Mugadziri weGore akapihwa GVB Biopharma
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » 2021 NYC White Label Expo Inotungamira Mugadziri wegore yakapihwa GVB Biopharma
2021 NYC White Label Expo Inotungamira Mugadziri wegore yakapihwa GVB Biopharma
GVB Biopharma, mutungamiri wehemp-inotorwa cannabinoid inoshanda musanganiswa wekugadzira uye chena label chigadzirwa maumbirwo, yakazivisa nhasi kuti yakanzi Inotungamira Mugadziri weGore pa2021 New York City White Label Expo. Chiitiko ichi, chinoitwa gore negore mukudonha, chinoita senge premier showcase uye sourcing show yevanotungamira vatengesi vepamhepo.
Mubairo uyu unocherekedza mugadziri akatanhamara wezvigadzirwa zvewhite label, izvo zvinobvumidza kugadzirwazve nevechitatu mapato. Iyo White Label Expo inotsanangura maitiro matatu ekusarudza kune ayo Anotungamira Mugadziri weGore Mubairo: hukama hwekuvimba nevatengi vavo, indasitiri inotungamira yemhando yekudzora hurongwa uye isina musono mutengi ruzivo. Vatatu vekupedzisira vakasarudzwa, uye GVB Biopharma yakasarudzwa semukundi pakati pemakambani anopfuura mazana mana anokodzera. Mubairo uyu nderimwe remaindasitiri mana ekuyemurwa akapihwa kuita kwakatanhamara munzvimbo dzekugadzira, kugadzirwa kwechigadzirwa, sevhisi uye kunyora kwakavanzika.
"Tiri kushanda nesimba kuti indasitiri ienderere mberi nezvigadzirwa zvitsva uye nekusimudzira mitemo," akadaro Phillip Swindells, Chief Executive Officer weGVB Biopharma. Iyo kambani yakazivikanwa kuWhite Label Expo nekuda kwekugadzira kwayo uye kugadzirisa modhi, iyo yakagadzira chiyero chitsva cheindasitiri chekutonga kwemhando uye kuvimbika kwekushanda.
Iko kuomarara kweGVB Biopharma yekutevedzera zviyero uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvaita kuti ive rimwe remazita anoremekedzwa kwazvo muindasitiri yehemp cannabinoid. Pamwe chete nenzvimbo-ye-iyo-zvivakwa zvekugadzira hemp muOregon, chena-label yevatengi chigadzirwa kugadzira mashandiro muLas Vegas, uye mahofisi ekutengesa emunyika muLos Angeles, Chicago, Denver neSouth Florida, GVB yakaratidza kugona kukura kukuru. . Kusvika kwayo kwakakura kwenyika uye kwepasirese kunoibvumira kuzadzisa kudiwa kuri kuwedzera kwehemp cannabinoids uye kuve mubatsiri weindasitiri akakosha kune vemabhizinesi uye mabhureki anoshandira zvinodiwa nemusika uyu.